Reducer MP4: Sida loo yareeyo awoodda MP4 (MPEG / Mpg) Video
> Resource > MP4 > Sida loo yareeyo awoodda MP4 (MPEG / Mpg) Video
Waxaad u baahan kartaa in la yareeyo tirada MP4 sababo kala duwan, sida E-mail video clips saaxiib, badbaadinta bannaan ee disk adag, la wadaago videos online, waxa ay ku ciyaari telefoonada gacanta, ECT. Wax kasta oo sabab u yahay, faylka video yar karaa meel xusuusta si fudud oo lacag la'aan ah, la qaybiyo videos badan si degdeg ah internet-ka, iyo qaar badan oo.
Haddii aad rabto in aad si loo yareeyo file MP4, aalad awood - Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa waxa aad u baahan tahay.
Best AVI Video Reducer for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
Si fudud loo yareeyo xajmiga AVI video files aan khasaaro tayada wax.
Awood inaad la qabsato goobaha video sida heerka yara, heerka muunad iyo in ka sii badan.
Hal-riix si loogu badalo AVI video files si qaabab kale.
Waxay bixiyaan hawlaha video tafatirka ee aasaasiga ah sida goo.
1 in reducer video Add MP4 videos aad
Ka dib marka aad soo dajiyo iyo ordi video reducer this, guji "Add Files" badhanka xitaa dooro files MP4 oo aad rabto in aad si loo yareeyo tirada ka. Waxa kale oo aad iyaga si toos ah u soo jiidi kartaa galay uu furmo suuqa hoose.
2 Bilow yareeyo xajmiga MP4
Riix image qaab dhinaca midig ee suuqa hoose ay u bilowdo suuqa kala goobta. Ka dib markii in, aad gacanta qabsato karaa beegyada uu wax soo saarka adigoo gujinaya fallaadha ag khaanadda uu ka soo xusho liiska hoos-hoos ama double-gujinaya ka column iyo buuxinta presets aad. Waxa kale oo aad sax karaa "Tirada yar" doorasho iyo ha barnaamijka resize size ee MP4 isla markiiba.
Ka dib markii in, ku dhacay OK oo taga si interface ugu weyn ee dib. Markaas inaad ogaataa inay suurtowdo video size wuxuu noqonayaa yar marka la barbar dhigo mid ka mid ah asalka ah.
Fiiro gaar ah: ka dib yaraynta tirada MP4, tayada video yaraan doonaa. Sidaas waa inaad dheeli dhexeeya size oo tayo leh.
3 Save file cusub MP4
Marka aad ku qancaan natiijada, doortaan qaab wax soo saarka ku haboon hadii aad rabto in aad si loogu badalo file MP4 in ay qaab kale. Markaasuu ku dhacay "Beddelaan" si ay u bilaabaan dhoofinta file cusub. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa suuqa kala DVD hoose iyo faylka si DVD ku gubi doonaan arrimo xor ah oo fiican in daqiiqo.
Video Tutorial: Sida loo yareeyo awoodda MP4 (MPEG / Mpg) Videos
Sida loo Edit MP4 in Windows iyo Mac
Sida loo Resize Files MP4
Sida loo jar MP4 (MPEG-4) Video
Sida loo dar Audio in MP4 Video
Sidee inay la midowdo Files MP4 Multiple galay Mid ka mid ah
Sida loo Dallaga MP4 Files
Sida loo MP4 ka saar Audio
Top 5 Best Video Editors MP4 Free
Sida loo dar subtitles in MP4 Files